सानो कदम हिँड्दा अथवा अलिकति उकालो बाटो हिँड्दा स्या स्या हुन्छ भने यस्तो रोगको लक्षण हुनसक्छन्।बेलैमा जानी राख्नुहोस |
काठमाडौं- रक्तप्रवाहमा समस्या भएर वा रगतमा अक्सिजनको कमी भएर अंगहरुमा (Organs /Tissue) अक्सिजनको आपूर्तिमा कमी हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा बिरामीलाई स्वाँस्वाँ हुने गर्छ ।कुनै पनि व्यक्तिको फोक्सोमा समस्या भए पनि स्वाँ स्वाँ हुने सम्भावना बढी हुन्छ । शुरुमा स्वाँ स्वाँ हुने समस्या काम गर्ने समयमा वा हिड्ने बेलामा मात्रै हुन्छ । बिस्तारै यो समस्या बढ्दै गएर अलिकिति हिंड्दा वा १ तल्ला भ¥याङ् चढ्दा पनि स्वाँ स्वाँ हुन थाल्छ ।
यदि कुनै पनि व्यक्तिलाई बसिरहेको बेलामा पनि स्वाँ स्वाँ हुन्छ भने त्यसलाई राम्रो मानिदैन । साथै सुत्दा स्वाँ स्वाँ हुने र बस्दा ठीक हुने लक्षण मुटुरोग वा फोक्सो रोगसंग सम्बन्धित रोग भएको हुन सक्ने अनुमान लगाउँन सकिन्छ । यसलाई अर्दोप्नीया (Orthopnoea) भनिन्छ । यस्तो लक्षण जुन व्यक्तिलाई देखिन्छ छिटो भन्दा छिटो चिकित्सककलाई देखाउनु पर्छ ।
स्वाँ स्वाँ हुने प्रमुख कारणहरु:मुटुसंग सम्बन्धित रोगहरु,फोक्सोसंग सम्बन्धित रोगहरु,मोटोपना,उच्चरक्तचाप,रगतको कमी (Anemia),गर्भवती महिला,धेरै दिनदेखि निष्कृय भएर हिंड्डुल नगरेमा
स्वाँस्वाँ भएमा को संग परिक्षण गराउँने :सुरुमा स्वाँ स्वाँ हुनुको कारण पत्ता लगाउनु पर्छ । यसका लागि मुटु र फोक्सो सम्बन्धी जाँचहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि जाँच गर्दा पनि कुनै रोग पत्ता नलागेमा मोटोपनाको कारणले यो समस्या उत्पन्न भएको हुन सक्छ ।
यसको लागि छातीको एक्सरे, इ सि जी इको गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वाँ स्वाँ हुने बिरामीले जेनेरल फिजिसियन वा सीधै मुटुरोग विशेषज्ञसंग जचाउँन मिल्छ । फोक्सो रोग साबित भइसकेका बिरामीलाई अप्ठ्यारो भएको बेलामा जेनेरल फिजिसियन वा फोक्सो रोग विशेषज्ञलाई जचाउँन मिल्छ ।
(मुटु रोग विशेषज्ञ डा. ओम मूर्ति अनिलको अवफसियल फेसबुक पेजबाट साभार)
यमराज बन्दै टिपर:बाटामा हिडिरहेकी १८ वर्षीय अन्सुको निधन!
श्रीमान विदेशमा,घरमा श्रीमती गर्भवती छु भन्छिन्:‘सपनामा आउने गर्थे श्रीमान्
रातीको समयमा भुलेर पनि नखानुहोस यस्ता खानेकुरा,मुटुको रोग निस्किन सक्छ।समयमै जानकारी लिनुहोस्
चिया पिउने बानी छ भने एकचोटी अवश्य पढ्नुहोस,नत्र ढिलो होला
ग्यास्ट्रिक छ भने अल्सर बाट क्यान्सर नहुन दिनका लागी अनिवार्य रुपमा सेवन गर्नुहोस यी पेय पधार्थ,अस्पताल धाउनै पर्दैन।जानकारी सेयर गर्नुहोला